Nhepfenyuro Yakafuridzirwa ne 'Iyo Kupenya' Yakarairwa HBO Max
musha Horror Varaidzo Nhau Nhepfenyuro Yakafuridzirwa ne 'Iyo Kupenya' Yakarairwa HBO Max
yakanyorwa na Waylon Jordan April 16, 2020
HBO iri kuburitsa zvimisikidzwa zvese zvemukati zvemukati mayo ichauya HBO Max, chikuva chekutepfenyura chakagadzirirwa kutanga muna Chivabvu 2020, uye zvinoenderana neZvakasiyana, izvo zvinosanganisira mutsva wakateedzana unobva pa kupenya titled Kutarisa.
Iyo showa ichagadzirwa ne JJ Abrams nekambani yake yeBad Robot Productions.
Kutarisa achanzi anoongorora nyaya dzisinga tsanangurike dzehotera yeOverlook sezvakanyorwa naStephen King mune rake 1977 bhuku. kupenya. Iyo novel inotaura nezvemhuri yakatora basa rekuchengeta-muridzi wehotera mukati memwedzi yechando. Zvisinei, vanokurumidza kuona kuti hotera iri kwete, zvachose kusagara.
Icho, pamwe, rimwe remabasa aMambo ane mukurumbira mune basa rakaburitsa akawanda echinyakare. Akavakira rondedzero pane nhoroondo uye zvakare anonzi akatambudza Stanley Hotel mumusha wemakomo weEstes Park, Colorado.
Iyi ingori chete yeakateedzana Abrams uye Bad Robot vari kugadzirira yekushambadzira sevhisi. Ivo vari kushandawo pane Mutongi Anodonha Rima, uye Duster, yepakutanga mutambo wemitambo.
HBO Max yakagadzirirwa kuvhurwa mwedzi unotevera ine hombe katarogu yemitambo uye mabhaisikopo pamwe nezviri pakutanga zvese zvemadhora 14.99 pamwedzi, iwo mutengo wakaenzana neazvino HBO Go kunyoreswa. Vanyoreri vakatonyoresa kare kuHBO Go, vachakwanisa kusimudzira kunaMax pazuva rekutanga.
Iwe unofarira here tarisiro yeiyi nhevedzano? Regai tizive zvaunofunga mune zvakataurwa!
HBO MaxJJ AbramsKutarisastephen kingkupenyaWaylon Jordan
Lin Shaye Anotungamira ku LA mu 'Penny Anotyisa: Guta reNgirozi'
Kuunza "Psycho Straws" yeHorror Lover's Balanced Breakfast